Sina SAE J1772 Mpanamboatra sinoa miorina amin'ny rindrina EV fiara ho an'ny famokarana sy famokarana onjampeo any an-trano | Teknolojia iraisana
Ny kalitao tsara dia voalohany; fanompoana lehibe indrindra; fiaraha-miasa ny orinasa ”dia ny filozofia orinasam-pandraharahana ataonay izay manara-maso hatrany ary arahin'nny fikambananay ho an'ny New Arrival SAE J1772 China Manufacturer Wall-Mounted EV Car Charge for Home Charging Station," Passion, Honesty, Sound fanampiana, fiaraha-miasa matotra sy fampandrosoana "dia ny tanjontsika. Izahay eto dia miandry vady manodidina ny tontolo iainana!
Teo aloha: SAE J1772 Car Car Battery Charger 32A miaraka amin'ny ETL Certificate
Manaraka: Manamboara US Unit EV Charger ho an'ny fiara elektrika miaraka amin'ny karazana 1
Vidin'ny mpandefa fiara elektrika
Sarany amin'ny famakiana herinaratra
Toeram-piambenana an-trano mitondra fiara elektrika
ev charger fampitahana
Ev vidin'ny fiampangana
Isa mazava faingana